2 Tantara 23 - Ny Baiboly
2 Tantara toko 23
Ny nanonganana sy namonoana an'i Atalia.
1Tamin'ny taona fahafito, rahefa niha-nahery Joiadà dia nalainy ho mpikambana aminy ny tompon-jato Azariasa zanak'i Jerohama, Ismaela zanak'i Johanàna, Azariasa zanak'i Obeda, Maasiasa zanak'i Adaiasa, ary Elisafata zanak'i Zekrì. 2Nitety an'i Jodà ireo, namory ny Levita tany amin'ny tanànan'i Jodà rehetra mbamin'ny loham-pianakaviana amin'Israely dia tonga tany Jerosalema izy ireo. 3Nanao fanekena tamin'ny mpanjaka tao an-tranon'Andriamanitra avokoa ny fiangonana rehetra teo. Hoy Joiadà tamin'izy ireo: Indro hanjaka ny zanaky ny mpanjaka araka ny voalazan'ny Tompo, ny amin'ny taranak'i Davida. 4Izao no hataonareo: Ny ampahatelonareo, izay miditra hanao fanompoana amin'ny andro sabata, na mpisorona na Levita, dia hatao mpiambim-baravarana; 5ny ampahatelony ho eo amin'ny tranon'ny mpanjaka, ny ampahatelony ho eo am-bavahadin'i Jesoada, ary ny vahoaka rehetra ho eo an-kianjan'ny tranon'ny Tompo. 6Aza misy miditra ao an-tranon'ny Tompo afa-tsy ny mpisorona sy ny Levita manao fanompoana ihany; ireo no mahazo miditra ao, satria masina ireo; ary ny vahoaka rehetra tsy maintsy mitandrina ny fandaharan'ny Tompo. 7Ny Levita hanemitra manodidina ny mpanjaka, samy mitana ny fiadiany voatsoaka avy, ka raha misy miditra ao an-trano vonoy, ary na miditra na mivoaka ny mpanjaka dia hanotrona azy hianareo.
8Notanterahin'ny Levita sy Jodà rehetra avokoa izay nandidian'i Joiadà mpisorona. Samy naka ny olom-peheziny avy izy, na ireo miditra hanao ny fanompoana, amin'ny andro sabata, na ireo niala, fa tsy nasian'i Joiadà avaka ny antokony rehetra. 9Natolotr'i Joiadà mpisorona an'ireo tompon-jato avokoa ny lefona aman'ampinga nananan'i Davida mpanjaka, hita tao an-tranon'Andriamanitra, na ny lehibe na ny kely. 10Ary ny vahoaka rehetra, samy mitam-piadiana, nalahany hanodidina ny mpanjaka avokoa, hatramin'ny lafiny an-kavanan'ny trano ka hatramin'ny lafiny an-kavia, teo akaikin'ny otely ka teo akaikin'ny trano. 11Dia nentiny nandroso ny zanaky ny mpanjaka, ka natao teo amboniny ny satrok'andriana sy ny vavolombelona, ary natsangana ho mpanjaka. Nohosoran'i Joiadà sy ireo zanany izy dia nataony hoe: Ho ela velona anie ny mpanjaka!
12Nony ren'i Atalia ny fihahohahon'ny vahoaka nidodododo sy nihoby ny mpanjaka dia mba nankao amin'ny vahoaka tao an-tranon'ny Tompo izy. 13Nijery izy ka inty ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny lampihazo eo amin'ny fidirana; ny lehibe amam-pitsoka trompetra nanotrona ny mpanjaka, ary ny vahoaka rehetra amin'ny tany revon-kafaliana; ny trompetra notsofiny; ary ny mpihira an-java-maneno nanoro hevitra momba ny hira fiderana. Nandriatra ny fitafiany Atalia ka niantso hoe: Fikomiana! Fikomiana! 14Fa nasain'i Joiadà mpisorona hivoaka ny tompon-jato, mpifehy ny miaramila, ka nataony hoe: Ento izy eo anelanelan'ny laharana hiala eto, ary vonoy amin'ny sabatra izay manaraka azy na iza na iza. Satria ny mpisorona efa nilaza hoe: Aza mamono azy ao an-tranon'ny Tompo. 15Dia nihataka teo an-daniny roa ny olona, ka lasa nankany amin'ny fidirana eo am-bavahadin-tsoavaly ho ao amin'ny tranon'ny mpanjaka ravehivavy, ka dia tao no namonoany azy.
16Nampanaovin'i Joiadà fanekena ny vahoaka sy ny mpanjaka mbamin'ny tenany, fa tsy maintsy ho vahoakan'ny Tompo izy ireo. 17Koa niditra tao an-tranon'i Baala ny vahoaka rehetra, dia noravany io, notorotoroiny ny otely mbamin'ny sarin-javatra teo, ary novonoiny teo anoloan'ny otely Matana mpisoron'i Baala. 18Ary nametrahan'i Joiadà mpitandrina ny tranon'ny Tompo eo ambany fifehezan'ny mpisorona sy ny Levita, izay notokotokoin'i Davida tao an-tranon'ny Tompo, hanatitra sorona dorana amin'ny Tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Moizy, amim-pifaliana sy fihirana, araka ny nasain'i Davida hatao. 19Nasiany mpiandry ny varavaran'ny tranon'ny Tompo, mba tsy hisy olona voaloton'inon'inona hiditra eo. 20Dia nalainy ny tompon-jato, ny olo-manan-kaja, ny manam-pahefana amin'ny vahoaka, mbamin'ny vahoaka rehetra amin'ny tany, ka nentiny nidina avy ao an-tranon'ny Tompo ny mpanjaka; dia niditra tao an-tranon'ny mpanjaka izy ireo, nihazo ny vavahady ambony, ary nametraka ny mpanjaka teo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana. 21Nifaly ny vahoaka rehetra amin'ny tany ary nandry fahizay ny tanàna. Fa Atalia novonoina tamin'ny sabatra. >